बुढीगंगामा प्रसूति सेवा : सेवा लिनेलाई पुरस्कार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
(मोरङ) — बुढीगंगा गाउँपालिकाका सातवटा वडामध्ये वडा २ स्थित स्वास्थ्य चौकीमा पहिलोपटक प्रसूति सेवा सुरु भएको छ । प्रसूति सेवा लिने चार महिलालाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप मंगलबार पुरस्कृत गरेको छ ।
प्रसूति सेवा सञ्चालन भएपछि पहिलोपटक प्रसूति गराउने स्थानीय २० वर्षीया सविना ऋषिदेवलाई गाउँपालिकाले २५ हजार नगद, साडी र कम्बल, स्वास्थ्य चौकीले १ हजार र कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले साडी हस्तान्तरण गरे ।
सेवा लिने दोस्रो अनु ऋषिदेवलाई गाउँपालिकाले १५ हजार नगद, साडी र कम्बल, स्वास्थ्य चौकीले १ हजार नगद र कार्कीले साडी प्रदान गरे । सेवा लिने तेस्रो पवित्रा परियारलाई गाउँपालिकाले १० हजार नगद, साडी र कम्बल, स्वास्थ्य चौकीले १ हजार नगद र साडी दिइयो । यस्तै, प्रसूति सेवा लिने चौथो महिला आरती ऋषिदेवलाई गाउँपालिकाले ५ हजार नगद, साडी र कम्बल, स्वास्थ्य चौकीले १ हजार ८ सय नगद र कार्कीले एउटा साडी प्रदान गरे । कार्कीले उक्त स्वास्थ्य चौकीमा मंसिर महिनाभर प्रसूति सेवा लिने प्रत्येकलाई १/१ वटा साडी दिने घोषणा समेत गरे । वडा २ का अध्यक्ष रेवतीनारायण चौधरीले स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा लिनेमध्ये पहिलोपटक छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहनस्वरूप २१ हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले ४ वटा गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिकाको सातवटै वडामा प्रसूति सेवा नभएकाले गरिब, विपन्न, दलित, पिछडा वर्गले आर्थिक अभावमा अस्पतालमा प्रसूति गराउन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको बताए । वडा २ मा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण भएपछि उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गाउँपालिकाले प्रसूति केन्द्र निर्माण गरेर मंसिर २ मा उद्घाटन गरेयता प्रसूति सेवा लिन आएका ८ जनामध्ये ४ जनालाई रेफर गरिएको र ४ जनाको प्रसूति गराइएको हेल्थ असिस्टेन्ट रवीन्द्रकुमार महतोले बताए । उनले प्रसूति भएका ४ जनाले छोरालाई जन्म दिएको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:२६
विशेषज्ञ चिकित्सकसँग जँचाउन ओपीडीमा आएका बिरामी रेजिडेन्ट डाक्टरलाई भेटेर फर्कन्छन्
मंसिर २५, २०७६ मकर श्रेष्ठ, फातिमा बानु
काठमाडौँ — स्याङ्जाका रेशमलाल रानाभाट शुक्रबार मुटु जाँच गराउन वीर अस्पताल पुगे । ओपीडीमा जाँचपछि चिकित्सकले सिफारिस गरेअनुसार ल्याबमा परीक्षण पनि गराए । रिपोर्ट लिएर त्यही दिन ओपीडीमा जाँदा चिकित्सक भेटाएनन् । आइतबार बिहान फेरि रिपोर्ट देखाउँदै कार्डियो विभागमा बिरामीको नाम दर्ता गराउने ठाउँमा पुगे । दर्ताका कर्मचारीलाई उनले सोधे, ‘विशेषज्ञ चिकित्सक को हुनुहुन्छ ?’ ती कर्मचारीले रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्रै भएको उनलाई जानकारी गराए ।
गाउँ फर्कन हतार भएपछि मन नलागे पनि उनले रेजिडेन्टलाई देखाए । उनी ओपीडीमा छिर्नेबित्तिकै आइपुगिन्, त्रिशूलीकी सरिता देवी । उनले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक खोजिन्, भेटिनन् ।
कीर्तिपुरकी विनिता पौडेल छोरा र श्रीमान्सँगै आएकी थिइन् । कार्डियो विभागमा छिर्नेबित्तिकै उनीहरूले विशेषज्ञ चिकित्सक खोजे । दर्ताका कर्मचारीले भोलिमात्रै आउने जानकारी गराएपछि उनीहरू फर्किए । थाइराइडका चिकित्सकले विनितालाई कार्डियोमा देखाउन भनेका थिए । ‘हामीले सोचेजस्तो वीर अस्पताल होइन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘मुटुको त डाक्टर नै पो नआउने रहेछ ।’ आइतबार डा. आरके साहको समूह ओपीडीमा बस्नुपर्ने पालो थियो ।
स्वास्थ्य जाँच गराउन मेडिसिन विभागमा पुग्ने बिरामीले पनि आइतबार विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भेटेनन् । रेजिडेन्टलाई देखाएर बिरामीहरू फर्किए । आइतबार प्राडा. रेवतीरमण मल्ल नेतृत्वको युनिट ओपीडीमा बस्नुपर्ने थियो । यो युनिटमा सहप्राध्यापक डा. मनोज शाह, डा. अनन्तभक्त उप्रेती छन् । यीमध्ये डा. अनन्त ओपीडी सुरु भएपछि केहीबेरमा आए, ११ बजे बाहिरिए । त्यसपछि रेजिडेन्टको भरमा ओपीडी चलिरह्यो ।
विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका बिरामी रेजिडेन्टलाई देखाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । विशेषज्ञ चिकित्सक प्राय: ढिला आउँछन्, चाँडै फर्कन्छन् । अस्पतालले ओपीडीमा विशेषज्ञ चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिएको छ, तर हरेक विभागको ओपीडीमा जिम्मेवारी तोकिएका विशेषज्ञ चिकित्सक आउँदैनन् । ‘कहिले आउनु नै हुन्न । आए पनि ११ बजे आउनुहुन्छ, १ नबज्दै फर्कनुहुन्छ,’ मेडिसिन विभागमा रहेका एक कर्मचारीले भने ।
ओपीडी सेवा लिन बिहान ६ बजेदेखि सर्वसाधारण टोकन लिन आइपुग्छन् । ८ बजे काउन्टर खुलेपछि डाक्टरलाई देखाउन लाइनमा पुग्छन् । ९ बजेदेखि सुरु हुने ओपीडी १० बजे पनि सुरु हुँदैन । रेडियोलोजी विभाग पौने १० बजेसम्म पनि खुलेको थिएन । सीटी स्क्यान र एक्सरे गर्न लाइन लागेर बसेका बिरामी बाहिर कुरिरहेका थिए । कुर्नेमा कोही खाली पेटका थिए, कोही पिसाब रोकेर बसेका । बिहानमात्रै होइन टिफिन समय दुई बजेपछि पनि भिडियो एक्सरे र सीटी स्क्यान गर्ने कोही थिएनन् । हामी साढे २ बजे भिडियो एक्सरे कोठामा छिर्दा सुनसान थियो । बाहिर कुर्नेको लाइन भने लामो देखिन्थ्यो ।
फिजियो थेरापी विभाग पनि १० बजेसम्म खुलेकै थिएन । तनहुँका कृष्णप्रसाद पौडेल हातको फिजियो गराउन १० बजे पुगेका थिए । ‘९ बजे खुल्ने भन्थे । अझैसम्म कोही आएका रहेनछन्,’ उनले भने । सर्जरी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक पनि ११ बजेसम्म ओपीडीमा आइपुगेका थिएनन् । विशेषज्ञ नआएपछि रेजिडेन्टले ओपीडी धानिरहेका थिए । सर्जरी विभागको ओपीडीमा आइतबार प्राडा इन्द्रकुमार झा नेतृत्वको युनिटको पालो थियो । ‘सिनियर डाक्टर सापहरू आउने बेला हुन लाग्यो,’ लाइन मिलाइरहेका कर्मचारीले ११ बजे हामीलाई भने । ओपीडीमा बस्नुपर्ने टिममा त्यस दिन डा. अनिप जोशी, डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, डा. रामाशंकर प्रसाद यादवको पालो रहेछ । यो युनिटमा अवकाश पाइसकेका युहानचन्द्र सिवाकोटीको नाम अझै बोर्डमा छ ।
मेडिसिन विभागको ओपीडीमा जँचाउन आएका सर्वसाधारण । यो विभागमा आइतबार विशेषज्ञ चिकित्सकबिनै ओपीडी चलाइएको थियो । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
१० बजे पनि ओपीडी सुरु नहुनेमा नाक, कान, घाँटी विभाग पनि थियो । १० बजे हामी पुग्दा बिरामी र तिनलाई सहयोग गर्ने ६८ जना लाइनमा थिए । अबेर भए पनि विभागीय प्रमुखसहितको टोली ओपीडीमा आइपुगे । लिभरको ओपीडी आइतबार २ बजेबाट थियो । डा. सुधांशु केसीको युनिट २ नबज्दै ओपीडी छिरिसकेको थियो । डेन्टल, ग्यास्ट्रो विभागका प्रमुखसहितको टोली ९ बजेदेखि ओपीडीमा छिरिसकेको थियो । सर्जरी, युरोलोजी विभागका चिकित्सक भने ढिला आइपुगे । अस्पतालमा नियमित जाँच गराउने बिरामीका अनुसार युरोलोजी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक पनि ओपीडीमा सबै हुँदैनन् ।
१२ बजेपछि बिरामी जाँच्नै छाडेर औषधि कम्पनीका एमआरलाई समय दिने वीर अस्पतालको अर्को समस्या छ । बिहान साढे ११ बजेदेखि ओपीडीबाहिर एमआरहरू आउन थाल्छन् । १२ बजे त चिकित्सकलाई भेट्ने लाइनमा उनीहरू हुन्छन् । कतिपय विभागले साढे १२ बजेपछि मात्रै एमआर भेट्ने लेखेका हुन्छन् । तर, त्यसअघि नै उनीहरू छिरेको देखियो । ओपीडीमा बिरामी जाँच गरिरहेका रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समेत एमआरले घेरेपछि बाहिरका बिरामी कुरेको कुर्‍यै हुन्छन् । यसरी कुर्नेमा सर्जरी विभागमा भेटिएकी नुवाकोटकी कमला तामाङ पनि हुन् । पीएसी क्लिनिकमा बिहानदेखि उनी चिकित्सकको पर्खाइमा थिइन् । उनले खाजेको चिकित्सक ढिला आए । उनी शल्यक्रियाको मिति लिन यहाँ आएकी रहिछन् । १ बज्नुअघि नै चिकित्सक खाजा खान गएपछि उनले २ बजेसम्म कुर्नुपरेको थियो । ‘डाक्टर बिहान पनि ढिला आउनु भो । अहिले पनि हामीभन्दा पछि आउने हूल भित्र छिरेपछि पालो पाएनौं,’ उनले भनिन् । एमआरलाई पालो दिएकै कारण उनीसहित चार जना बिरामीले एक बजेअघि पालो पाएनन् ।
आइतबार बिहान ७ बजे हामी अस्पतालको ओपीडी र वार्डमा गयौं । सफाइमा सुधार देखिए पनि सर्वसाधारणले सोचेजस्तो सहजै सेवा पाउने व्यवस्थापन भएको पाएनौं । टिकट काट्न र डाक्टरलाई देखाउन लाइन बस्नुपर्छ । परीक्षणका लागि नमुना लिन फेरि लाइन नबसी हुन्न । ओपीडीको बिरामीको रिपोर्ट त अरूको भन्दा ढिला हुन्छ ।
हामी पुग्दा टिकट काउन्टरदेखि मुलगेट कटेर पनि सडकसम्म टोकन लिनेको लाइन थियो । कोही सरासर लाइनमा बसे, कोही लाइन मिचेर पस्न खोज्दै थिए । टोकन र टिकट लिने कोठाको सटर खुलेको थिएन । कुनबेला सटर खुल्ला र भित्र पसौंलाझैं गरेर केही मान्छे सटरमै टाँसिएका थिए । पहिलोपटक वीर छिर्नेहरू कसरी टोकन लिने, कहाँ टिकट लिने भनेर अलमलमा थिए । यत्तिकैमा ८ बजे ओपीडी टिकट काट्ने कोठाको सटर घररर... खुल्यो । लाइन लागेको भीडले टोकन निकाल्ने उपकरणलाई घेरिहाल्यो । यही भीडमा थिइन्, बाजुराकी प्रमिला परियार । टोकन लिन भन्दै उनी उपकरणतर्फ अघि सरिन् । बटन थिचेर टोकन निकाल्न नजानेपछि कर्मचारीतर्फ पुलुक्क हेरिन् । ती कर्मचारीले सघाउनुको साटो आक्रोश हुँदै भने, ‘छिटो गर्नुस् न पछाडि भीड बढिसक्यो । चलाउन आउँदैन क्या हो ? यहाँ लेखेकै छ त पढ्न आउँदैन ? पहिले कहिल्यै वीर अस्पताल आएको छैन कि क्या हो ?’
प्रमिलाले निन्याउरो भएर जवाफ दिइन्, ‘हामी त टाढा गाउँबाट आएको । यस्तो कहिले देखेको भए चलाउन जान्नु ।’ रिसैरिसमा कर्मचारीले टोकन निकालेर उनलाई थमाए । उनको पालो नम्बर थियो, १४१ । उनी केही कुरा अस्पतालका कर्मचारीलाई सोध्न चाहन्थिन् । तर, आँट गर्नै सकिनन् । ‘यो नम्बरको पालो आउन कति समय लाग्छ ? टिकट लिएको कति समयमा चिकित्सक आउँछन् ? भनेर सोध्न खोजेको फेरि रिसाउने हो कि भन्ने लाग्यो,’ उनले हामीसँग भनिन् । उनी सासूको उपचारका लागि बाजुरादेखि आएकी थिइन् ।
वीर यसै पनि गरिब र दुर्गमबाट आएका बिरामीको अस्पताल भनेर चिनिन्छ । तर, सामान्य प्रक्रियाबारे समेत थाहान नभएर धेरैजसो अलमलिइरहेका हुन्छन् । सोध्दा रिसाउने कर्मचारीको प्रवृत्तिले बिरामीलाई अरू प्रक्रियाका लागि निराश बनाउने गरेको छ ।
मन लागेको बेलामा राउन्ड
वीरमा कर्मचारी र चिकित्सकले बिहान ९ बजे हाजिर गर्नुपर्ने नियम छ । आइतबार साढे ९ बजेसम्म हाजिर गर्ने कर्मचारी त्यति थिएनन् । ९ बजे हाजिर गरेपछि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोलीले वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न राउन्ड लिनुपर्छ । १० बजिसक्दासम्म कुनै वार्डमा स्वास्थ्य टोली छिरेको भेटिएन ।
राउन्ड लिएर १० बजेदेखि ओपीडीमा बिरामी हेर्न जानुपर्ने नियम भए पनि अधिकांश चिकित्सक ढिला आउने गरेका छन् । हेमोडायलसिसको मेडिकल वार्डमा पाँच दिनदेखि भर्ना भएका तिलकप्रसाद पाठकका परिवार साढे १० बजेसम्म चिकित्सक टोलीको पखाईमा बसेको थियो । बिरामीको जानकारी लिएपछि खाना खाना जाने उनीहरूको योजना थियो । ‘डाक्टरहरू त्यही ११/१२ बजे आउनुहुन्छ, ‘पाठकले भने, ‘जति ढिलासुस्ती भए पनि सहनैपर्‍यो । केही भन्यो भने ‘चाँडो चाहिए प्राइभेट अस्पताल जानु’ भन्छन् ।’
कलेजोमा समस्या भएर मंसिर ९ गते भर्ना भएका जितबहादुर गुरुङ पनि बिहानको ११ बजेसम्म चिकित्सक टोली पर्खिरहेका थिए । टोलीबाट जानकारी लिएर औषधि किन्न जाने योजनामा रहेकी उनले पनि निकैबेर कुर्नुपर्‍यो । ‘नर्सलाई डाक्टर कहिले आउँछन् भनेर सोध्यो भने ‘आफ्नै टाइममा आइहाल्छन् नि कति सोधेको’ भनेर हर्काछन्,’ उनले सुनाइन् ।’
फार्मेसीमा औषधि छैन
मिर्गौलामा समस्या भएर ३२ वर्षीय गिरिराज न्यौपाने बाँकेदेखि उपचार गर्न वीर अस्पताल आए । चिकित्सकले उनलाई दुईथरी औषधि लेखिदिए, ‘एम्टस र सारटेल’ । ‘एम्टस’ अस्पतालको फार्मेसीमा पाइए पनि अर्को थिएन । अस्पतालबाहिरको निजी फार्मेसीमा गएर उनले औषधि किने । अस्पताल फार्मेसीमै औषधि पाएको भए उनले ५० प्रतिशत सस्तोमा पाउँथे । सस्तो औषधि पाइए पनि महँगो खालका पाउन गाह्रो छ । थोरै औषधि पाइने यही फार्मेसी पनि २४ घन्टा खुल्दैन ।
‘एक साताअघि सचेतपत्र’
वीर अस्पतालका निर्देशक डा केदारप्रसाद सेञ्चुरीले ओपीडीमा विशेषज्ञ चिकित्सक नबस्ने गरेको गुनासो आएपछि एक साताअघि सबैलाई सचेतपत्र समेत दिएको बताए । ‘हामीले अनुगमन गर्दा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक बस्ने गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘को आए, आएनन् सधैं हेर्न सकिँदैन । विशेषज्ञ चिकित्सकलाई लठ्ठी लगाएर किन नबसेको भन्ने कुरा पनि भएन ।’ सरकारको तलबभत्ता खाएपछि विशेष चिकित्सक अनिवार्य ओपीडीमा बस्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘समयमा आउने र तोकिएको अवधि काम गर्नु उहाँहरूको दायित्व हो,’ सेञ्चुरीले भने । उनका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक ९ बजे अस्पताल छिरेर १० बजेभित्र ओपीडीमा छिरिसक्नुपर्ने नियम छ । यस विषयमा अस्पतालको बैठकमा बारम्बार कुरा उठे पनि बिरामीले सास्ती पाई नै रहेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ १०:०८
बीपीमा शल्यक्रियाबिनै पत्थरी उपचार
छात्रा बेहोस हुन थालेपछि विद्यालयमै झाँक्री
भेटीमा पुजारीकै कब्जा
यलम्वर संवतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिन माग